Video: Colts.com wuxuu sameeyaa xayeysiinta fiidiyow ee kafaala qaadayaasha sida saxda ah! | Martech Zone
Video: Colts.com wuxuu sameeyaa xayeysiinta fiidiyoowga ee kafaala qaadayaasha wadada saxda ah!
Talaado, Nofeembar 13, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Pat ayaa fiidiyoow u soo duubay maanta qoyskii Colts ee bogaggii aan u maleeyay inay yihiin wax la yaab leh - isaga oo gudbinaya gaadhista Colts.com, myIndianaFootball.com iyo MyColts.net. Xaqiiqdii waxay soo saareen muuqaal fiidiyoow qurux badan oo ku daraya muuqaal wanaagsan advertising xayeysiis la mid ah. Mar kasta oo qof tan ku qoro boggooda, xayeysiistoodu wuxuu gaarayaa dhagaystayaal cusub. Si aad u wanaagsan ayaa loo qabtay
Pat sidoo kale wuxuu weydiiyaa su'aal muhiim ah… 7.5 milyan oo qof oo booqda Colts.com sanadkiiba, laakiin 280,000 oo soo booqda garoonka - kooxdee ayaa muhiim ah? Haddii ay lacag tahay, waxaan ku kalsoonahay in 7.5 milyan oo soo booqdayaasha iibsanaya alaabada la xiriirta Colts ay u badan tahay inay ka sarreeyaan iibinta tikidhada kooxda. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqdii waad ku doodi kartaa in dabada kuraasta ay tahay buuqa ciyaarta oo ay yihiin, si isdaba joog ah dadka ka fikiraya in ku filan kooxda inay ku qaataan waqti yar oo isbeddel ah kulan kasta.
Waxaan rabaa inaan raaco tikidhada-iibsadayaasha, Pat! Waxaan u maleynayaa in dadkaas badankood ay sii dheeraanayaan, xilliyada wanaagsan iyo kuwa xunba. Marnaba qiimo dhimis kuma sameyn doono saameynta aad ku leedahay koritaanka dadkaas marka laga yimaado 7.5 milyan oo soo booqdayaal ah in kastoo. Waa maalgashi qalbi furan, oo faa iido leh oo xiriir dhow la leh taageerayaashaada.
Tags: ra'yi uruurintaimtixaanka fikraddasahanka baaritaanka fikraddamarketing inboundnidaamka deegaanka ee suuq geyntasuuq-geynta suuq-geynta gudahaistaraatiijiyada suuq geyntasahanwordpress muwordpress multidomain
Maalinta Ciidda Halyeeyada
Shabakad Bulsho oo loogu talagalay Halyeeyada Ciidanka Badda Mareykanka!
Nov 13, 2007 at 8: 47 AM
Waa kuma Brutus?
Kaalay, Doug… ka fikir bannaanka ruugga! (er, garoonka) 🙂
Nov 13, 2007 at 9: 01 AM
Haye! Waxaan idhi 7.5 milyan waa maalgashi weyn oo faa'iido leh!